१७ हजार मान्छेे मारेको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरीः उतै पक्राउ पर्लान त ? | Sagarmathakhabar
१७ हजार मान्छेे मारेको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरीः उतै पक्राउ पर्लान त ?
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, चैत्र ०५, २०७५ समय - २०:०८:०७
नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी दिइएको छ । अमेरिकास्थित केन्‍टुकी विश्विविद्यालय फ्र्यांकफोर्ट केवाईका अनुसन्धान सहायक तीलबहादुर श्रेष्ठले संघीय अनुसन्धान ब्यूरो बाल्टिमोर, एमडीमा प्रचण्डविरुद्ध १७ मार्चमा उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा प्रचण्डलाई आतंककारीको संज्ञा दिइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, “आतंककारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साता अमेरिका भ्रमणमा आउने जानकारी आएको छ । केही समयअघि उनी अमेरिकन आतंककारी सूचीमा थिए । उनले गरेको विद्रोहमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसहरु मारिएका थिए । उनी श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि जोन हकिन्स अस्पतालमा जाने बताइएको छ ।”
प्रचण्ड अमेरिका पुग्नुअघि नै उनले उजुरी दिएको पाइएको छ । उजुरीमा आतंकवादविरुद्धको अमेरिकन नीति , नैतिक मान्यता, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताहरुका विषयप्रति ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । उनले उजुरीमा भनेका छन्, “मलाई कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ भन्‍ने विषयमा थाहा छैन । कृपया सम्बन्धित निकायमा पठाइदिनुहोला ।”
प्रचण्ड श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि १७ मार्चमा नै अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । यसै बीच प्रचण्ड विरुद्ध उजुरी परेपछि अब उनि उतै पक्राउ पर्ने हुन् की भन्ने आशंका भएको छ ।
यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा त्रिविका सहायक डिनलाई कालोमोसो
श्रीमतीबाट पीडित भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली
बाढी प्रभावित क्षेत्र अनुगमन गर्न, हेलिकोप्टरमा मन्त्रीको जम्बो टोली
डेकोरेसनको पैसा माग्दा ज्यान लोकदोहोरी गायक पंगेनीलाइ मार्ने धम्की
लागुऔषध बोकेर आएका युवक पक्राउ
निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न सरकालाई बाटो खुल्यो